Nyocha nke Spiritum - ọgụgụ isi n'ịntanetị
Ịgụ akwụkwọ ọgụgụ mmụọ nke oge a > Review Spiritum
Mgbe mmụọ na-akpali gị ịchọta nduzi n'inweta ụzọ gị n'ezie, nkà mmụta nkà mmụta nkà na ụma nke Spiritum dị njikere ịduzi gị. Usoro netwọk zuru ụwa ọnụ a ewerewo ọnọdụ dị ka ihe enyemaka iji nyere gị aka ijikọta (na asụsụ gị) na ndị ọkachamara na-asọpụrụ mba niile.
I nwere ike kwuo Spiritumakara aka na-akara Parentlọ ọrụ nne na nna ya, Eso.tv, na -emepụta mmemme TV nke uche nke a na-agbasa na mba 14 ma jiri ọtụtụ narị puku ndị na-ekiri ya jiri ịnụ ọkụ n'obi na-ele ya. N'ihi nke a, ị nwere ike ịtụ anya ụkpụrụ kachasị elu nke eziokwu, izi ezi na nghọta site na ọgụgụ gị.
Achọrọ ihe akaebe? Leba anya n'àgwà ha nke psychics. Spiritum na-eji nlezianya kpochapụ uche ndị kasị mma na obodo ọ bụla iji nye nduzi na ndụmọdụ dị elu, nke ahaziri maka onye ọ bụla chọrọ.
Onye ọ bụla nwere ike iji nlezianya akpọrọ ihe omume oge ochie dịka agụgụ kaadị tarot, numerology na astrology na / ma ọ bụ na e nwere talent na ike. A na-enyocha onye nke ọ bụla iji nyere aka hụ na ha na-eji onyinye onyinye nke ndị nwe ụlọ nyere ndị na-achọ ụzọ ndụ ha aka. Ha niile na-anọchite anya ikike dịgasị iche iche, gụnyere nduzi ime mmụọ, ịgụ ume, nrọ nrọ, ọgụgụ agụ, ịwafe, na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
Ma ọ dị mfe ịbanye! Ejiri saịtị ahụ iji rafuo ma ọ bụghị imebi gị na bọtịnụ ngwa ngwa ma dị mfe nke na-eme ka ị nwee ike ịhọrọ onye nwere uche, ikwu okwu na nkata vidio, ma ọ bụ ịzụta kaadị maka ịgụgụ onwe gị. Ọ bụrụ na ịhọrọ nhọrọ free okwu, ị nwere ike ịga n'ihu site na ịpị bọtịnụ vidiyo, nke na-egosi na vidiyo nke psychic a họọrọ. Ma ọ bụ ị nwere ike pịa na nke ọ bụla n'ime profaịlụ nke na-egosipụta "Free Chat Now" a ma ama.
Mgbe ahụ i nwere ike itinye aka na uche ị họọrọ site n'ịjụ ajụjụ ọ bụla na-ere ọkụ n'uche gị. Ị zutere onye gị na ya na-ebi ndụ ka ị ga-anọnyere ma ọ bụ na ị ga-enye ya ụlọ ọrụ ahụ? Ịme ọganihu na ọganihu ọrụ ọ na-echere gị n'akụkụ nkuku? Onye ị hụrụ n'anya ọ dị n'ebe dị mma? Ndi nrọ nrọ nke i nwere n'abali gara aga bu ihe iju anya nke icho anya na ichota?
Spiritum ndị ọkachamara na-ahazi ndụmọdụ na nduzi maka gị na ndụ ị na-ele anya. Site na ịchọta profaịlụ psychics, ị nwere ike ịchọpụta nke ọma ndị nke dị mma maka gị ma mee mkpebi kachasị mma. E nwere ọtụtụ ihe ga-enyere gị aka; profaịlụ bụ ihe zuru ezu na ihe ngosi ihe ngosi, nkà, ikike, ịgụ ihe, asụsụ ndị a na-ekwu okwu, ọnụahịa, nkwenye, ọbụna obere ndụ. Ọzọ dị ka ego a kwadoro, ị nwere ike ịchọpụta ọtụtụ ndị ọzọ dị njikere site na mmụọ ahụ ị na-atụle ma lee ọkwa ha ugbu a.
Dị ka ebe ọhụrụ dị ọhụrụ, Spiritum ka na-eto eto. Dịka ọmụmaatụ, enweghị nzacha nzacha na ntakịrị ihe dị ebe a; ihe a na-elekwasị anya bụ nke ọma na psychics. Ọ na-ewe ntakịrị ịnyagharị iji nweta ngalaba FAQ, nke a na-ezo n'okpuru "Enyemaka" na ala nke ibe. Anyị na-enyo enyo na a ga-agbakwunye ihe ndị ọzọ na mfe ịnweta ụgbọelu ka obodo na-aga n'ihu.
N'agbanyeghị nke ahụ, enwere ọtụtụ ihe Spiritum na-eme nke oma. Ọ bụrụ na ị bụ onye ọhụụ na saịtị ahụ, ị ​​nwere ike ịkparịta ụka na mmụọ mmụọ nke akara dị ka "enwere ugbu a maka Nkata Kwụsị" maka ihe ruru 10 nkeji n'efu. Mkparịta ụka ahụ n'efu na-eme ka ọ bụrụ ihe na-emesi obi ike ma ọ bụ; Enweghị ego ọ bụla dị mkpa iji nweta ọrụ nke Spiritum.
Spiritum kwadoro na mmeghe mmeghe ... na onye nwere ike ịta ụta maka ha? Ọ naghị adị mma karịa "free." Ozugbo i mejuru onwe gị na onye na-ahụ maka ụbụrụ gị ghọtara mkpa na ọnọdụ gị, ị nwere ike ịzụta ihe nrite, Ị nwere ike ịbanye na nkata vidiyo abụọ ma ọ bụ jikọọ site na ozi ma ọ bụ ekwentị ... nhọrọ gị. Onye ọ bụla na-ahụ maka ọgwụgwọ na-etinye ọnụahịa ya, na-amalite na 99 ¢ nkeji ma dabere na nkà nke ikike. Ọ dị gị mkpa ịmata oge ị gụrụ; n'ụzọ dị otú ahụ ị ga-amacha-n'ihu ihe ị gụrụ ga-eri na-enweghị ihe ijuanya.
Dị ka ị nwere ike ịtụ anya n'aka ụlọ ọrụ nke Eos.tv nwere, Spiritum agba mbọ imeju afọ ojuju. O b ur u na i nwegh i obi ut o mgbe i na-ag u ihe, i ga-enweta akw ukw o oz o iji nweere onwe gi n 'on od u ah u na obodo ha.
Ntọala ala: Spiritum anọchite anya ezigbo uru. Ikekwe ọ dịghị ọrụ ịgwọ ọrịa uche ọzọ nke na-arụ ọrụ taa na-enye nkwado dịgasị iche iche nke ndị nwere ezi uche uche n'ọtụtụ mba. Mgbe ị gbakwunyere na mkparịta ụka mmeghe na-enweghị ihe ọghọm, ọ dịghị ihe ga-efunahụ gị n'ịchọpụta nkà mmụta ọgwụ ndị a. Ma eleghị anya, ọdịnihu ọhụrụ ọhụụ ga-enweta.